MR MRT: လမ်းစ (Nov 8, 2016)
လမ်းစ (Nov 8, 2016)
"ဆန်တစ်ပြီ ဆယ်ပြား ဦးနု လာမှ စား။"
"ဆီတစ်ပုလင်း တစ်မတ် ဦးနုလာမှ ခတ်။"
"ဦးနုက သာသနာအတွက် အမြော်အမြင် ကြီးကြီးနဲ့ ပါလီမန်အထိ တင်ခဲ့တဲ့ သာသနာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အက်ဥပဒေတွေကို ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက အကုန်ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။"
သံဃာ့တက္ကသိုလ် ပျက်ခဲ့ရခြင်း အစရှိသော သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများစွာနှင့် ကြုံခဲ့ရပြီး သူ၏ ပညာရေးလမ်းစ ပျောက်ခဲ့ရပုံ၊ လမ်းစရှာခဲ့ရပုံတို့ကို သီတဂူဆရာတော်ကြီးက Association of Myanmar Buddhist Universities Academies and Colleges ၏ EC အစည်းအဝေး အဖွင့်သြဝါဒ၌ ထည့်သွင်းမိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။ သာသနာအတွက် လမ်းစရှာကြရန် ဆိုလိုတော်မူသည်။
ပြောင်းလဲချိန်ကို မျှော်လင့်ရသည့် ပြည်သူတို့၏ အမေ့ခေတ်၌ ဦးနု ပြန်လာတော့မည် မဟုတ်ပေ။ လမ်းစတို့ မည်သို့ ရှိလာမည်နည်း။
Posted by Ashin Acara. at 3:58 AM
Labels: 04. Others - အခြား, 08. News Words - သတင်းစကား